[Famerenana amin'ny alina] 'Mihoatra ny roa minitra tsy manam-petra' no tsy maintsy jerena amin'ny taona
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly [Famerenana amin'ny alina] 'Mihoatra ny roa minitra tsy manam-petra' no tsy maintsy jerena amin'ny Sci-Fi amin'ny taona
[Famerenana amin'ny alina] 'Mihoatra ny roa minitra tsy manam-petra' no tsy maintsy jerena amin'ny Sci-Fi amin'ny taona
by Brianna Spieldenner Novambra 1, 2021
by Brianna Spieldenner Novambra 1, 2021 361 hevitra
Toy izany koa Iray amin'ireo maty lasa klasika kolontsaina tsy ela taorian'ny nivoahany, ny mahavariana Mihoatra ny roa minitra tsy manam-petra dia ilay hatsikana sci-fi tsy maintsy jerena amin'ity taona ity izay lazainy fa ho resahin'ny olona aloha kokoa. Mitovy amin'ny taona 2019 Iray tapaka, Mihoatra ny roa minitra tsy manam-petra - izay nilalao tao amin'ny Nightstream tamin'ity taona ity - dia 70 minitra tokana mahavariana izay manasongadina ihany koa ny foto-kevitra fitsangatsanganana fotoana tsotra nefa mamirapiratra ary script iray mahaliana.
Ny voalohany amin'ny talen'ny Junta Yamaguchi, ity hatsikana tantara foronina siantifika hafahafa ity dia traikefa mampientam-po izay misarika ny sain'ny mpijery avy hatrany amin'ny fomba samihafa amin'ny diany.
Taorian'ny asa, hitan'i Kato (Kazunari Tosa) fa ny fakan-tsary nampifandraisiny tamin'ny fivarotany naseho teo amin'ny efijerin'ny solosainy tao amin'ny trano fonenany dia manana fahatarana roa minitra amin'ny fakantsary fiarovana ao amin'ny fivarotany ambany rihana. Gaga izy nahita ny sarin'ny tenany tao amin'ny kafe, niresaka taminy tamin'ny 2 minitra ho avy, nanomboka tamin'ny fanehoan-kevitry ny fifandraisana misy eo amin'ireo habaka roa miaraka amin'ny fahasamihafana roa minitra tamin'ny lasa sy ny ho avy.
Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny mekanika amin'ny fandehan'ny fotoana eo amin'ny varavarankely kely misy 2 minitra, ity sarimihetsika ity dia mampiseho fomba fijery mamelombelona momba ny karazana fitsangatsanganana fotoana ary mitazona ny tantara hivezivezy sy ny tantara an-tsehatra rehefa manandrana mamantatra ny hetsika manaraka miaraka amin'ilay mpilalao sarimihetsika ny mpijery. raha mbola mandeha ny famantaranandro.
Saika manomboka avy hatrany ny sarimihetsika miaraka amin'ny fitadiavana ny fandehan'ny fotoana, tsy mandany fotoana amin'ny fanariana ny mpijery avy hatrany amin'ny hetsika.
Ho an'ny lahatahiry voalohany - ary ho an'ny sarimihetsika tokana - ny famonoana manontolo dia tena mampitolagaga amin'ny zava-bita nandritra ny maha indie azy, tsy misy tetibola. Tsy vitan'ny hoe nalaina an-tsary fotsiny ity, fa nalaina sary ihany koa - ary tsy afaka manantitrantitra izany aho - amin'ny fakantsary iPhone.
Raha ampitahaina amin'ny foto-kevitra fitsangatsanganana fotoana hafa, manomboka amin'ny tetibola ambany ka hatramin'ny ambony, ity iray ity dia mahatsapa ho vaovao ary manaitra ny hevitra, ary ankoatra ny zava-misy fa izany rehetra izany dia narafitra tamina sary tokana. Tsotra sy lo-fi ilay foto-kevitra, nefa mbola nanaitra ny saiko rehefa niezaka nieritreritra tsara aho. Izay mpankafy sarimihetsika mandeha amin'ny fotoana dia ho tia an'io fihodinana miavaka amin'ny karazana io.
Ny mpilalao ao amin'ny Beyond an Infinite Minute miaraka amin'ny Time TV. – Via Nightstream
Isaky ny elanelana roa minitra eo anelanelan'ny "TV" dia mahasarika olona vaovao hanandrana ny fahitalavitra, mamorona rivo-piainana mahatsikaiky amin'ny hijinks mahatsikaiky izay mifangaro amin'ny sehatra maizina kokoa rehefa mandeha ny sarimihetsika.
Na dia miady amin'ity foto-kevitra sci-fi vaovao ity ao anatin'ny fotoana fohy ao anatin'ny fakana iray aza, dia mbola mahavita mametraka fanontaniana momba ny fandehanana fotoana misy izay manenika ilay sarimihetsika amin'ny feo manelingelina, toy ny famoronana paradoxes.
Raha jerena ny fameperana marobe amin'ity sarimihetsika ity (toerana tokana, tetibola ambany, fe-potoana 2 minitra) dia mahagaga ny nahavitan'ity sarimihetsika ity ny zavatra vitany tao anatin'ny 70 minitra.
Toy ny mpijery amin'ny sarimihetsika, raha vao manomboka mijery ianao dia sarotra ny tsy mampiasa vola amin'izay hitranga manaraka. Mihoatra ny roa minitra tsy manam-petra. Na dia manomboka maka sary an-tsaina ny fomba fijery hafahafa momba ny fitsangatsanganana fotoana aza ianao, ny sarimihetsika dia manipy anao amin'ny alàlan'ny fihodinana vaovao izay mitazona azy ho mahaliana kokoa.
Mihoatra ny roa minitra tsy manam-petra tsy mbola azo hofaina, fa vao haingana no nahazoan'ny Indiecan ka tandremo ny masonao amin'ity sci-fi marani-tsaina ity izay azo antoka fa horesahina amin'ny taona ho avy.
Jereo bebe kokoa Fandrakofana amin'ny alina eto, ary jereo ny tranofiara momba ny Mihoatra ny roa minitra tsy manam-petra eto ambany.